Ny raharaham-behivavy - inona raharaham-barotra hanokatra vehivavy?
Ny maha-vehivavy vehivavy miasa ao amin'ny tontolo maoderina dia tena mendri-piderana sy mahasoa. Matetika, ny toerana ambony dia ny solontenan'ny firaisana ara-drariny. Ahoana no ahafahan'ny orinasa vehivavy iray manana fampiasam-bola madinika miezaka hahalala amin'izao fotoana izao.
Vehivavy iray miasa - ho an'ny
Rehefa manao raharaham-barotra ny vehivavy iray, dia fitahiana ho azy sy ny tontolo iainany ve izany? Noho izany, misy ny tombontsoa avy amin'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny fandraharahana:
Fahaleovan-tena ara-bola . Ny fandraisana andraikitra dia afaka manolo-tena sy mamelona ny zanany ny vehivavy. Tsy mila mangataka sy miandry vola amin'ny olona izy. Olona tsy miankina amin'ny tenany izy.
Manatsara ny fahasalaman'ny fianakaviana . Ny mpandraharaha dia mandray anjara amin'ny tetibolam-pianakaviana , na manome tanteraka ny fianakaviany.
Endrika mahafinaritra . Raha tsy fanaovana raharaham-barotra ao an-trano izany, dia matetika ny vehivavy dia mila mihaona amin'ny mpanjifa mety sy ny mpiara-miasa. Ary midika izany fa tokony hijery tsara izy.
Ankoatra ny tombontsoa azo atao rehetra, ny raharahan'ny vehivavy dia manana fatiantoka:
Permanent asa . Ny vehivavy dia tsy manome fotoana ampy ho an'ny fianakaviany sy ny zanany.
Tsy ampy ny fotoana hitsaharana . Manao ny asa aman-draharahany manokana ny ankizivavy, ary matetika izy ireo no miala sasatra mandritra ny fotoana fialan-tsasatra.
Olana eo amin'ny fiainany manokana . Ny vehivavy miasa matetika dia manana olana eo amin'ny fifandraisana amin'ny lehilahy, satria tsy dia misy fotoana firy ny fifandraisana, mampiaraka. Matetika ny vehivavy toy izany no mijanona mandritra ny fotoana maharitra.
Karazam-barotra inona no misokatra ho an'ny vehivavy?
Vehivavy maoderina dia tsara vintana, satria misy andianà orinasa mahaliana maro izao:
Mitafy lamba fitafiana ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe mba handidiana.
Fambolena sy fivarotana voninkazo.
Manoritra portraits to order.
Network marketing - varotra kosmetika, sakafo fanampiny, fofomamy.
Manokatra orinasa tsy an-tserasera na aterineto .
Famokarana sy fivarotana asa tanana.
Tolotra eo amin'ny sehatry ny hatsarana sy ny fahasalamana.
Sakafo mofomamy mikarakara.
Fanokafana ny efitrano fandidiana.
Sampan'asan'ny psikology tsy miankina.
Sary an'ny ankizy Creative.
Vehivavy miasa amin'ny aterineto
Ny fiterahana dia fotoana mahafinaritra. Matetika ny vehivavy no manokatra ny rivotra faharoa ary misy hevitra maro mahaliana. Tena mahasoa ny asa ao an-trano ho an'ny vehivavy, indraindray tena mahasoa. Misy hevitra ara-barotra toy izany ho an'ny vehivavy ao amin'ny didim-panjakana:
Manokatra fivarotana ankizy an-tserasera.
Mamoròna ny blôginao na ny YouTube.
Famoronana mari-tsoratra kopia.
Fandraharahana amin'ny aterineto ho an'ny fivarotana kosoa, fofona.
Toeram-ponenany manokana ho an'ny fampandrosoana sy fampiroboroboana tranokala.
Fampianarana amin'ny fiteny skype.
Birao ho an'ny vehivavy ao an-trano
Ny hevitra momba ny fandraharahana ho an'ny vehivavy maoderina dia tsy dia vitsy loatra. Raha azo atao dia afaka miasa ao amin'ny birao na any an-trano ny vehivavy. Ny safidy farany dia tena mahafinaritra ho an'ny reny tanora. Ny raharaham-barotra ho an'ny vehivavy ao amin'ny didim-panjakana dia indraindray mahomby. Misy karazam-behivavy toy izany any an-trano:
Hanamboatra lahatsoratra vita tanana . Mety ho saribakoly sy biby avy amin'ny fitaovana manaparitaka.
Business amin'ny Internet . Raha mipetraka ao an-trano, vehivavy iray dia afaka mamorona studio amin'ny endriny an-tsoratra, na sampana marketing.
Ny mpivarotra vehivavy koa dia malaza. Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny alemaina
Famolavolana mofo mofomamy . Mofomamy ao an-trano ny mofomamy ao amin'ny didim-panjakana ary ny renibeny misotro ronono. Eto, ny oha-pitenenana sy ny fomba fiasa manokana ho an'ny tsiranoka mpanjifa dia manan-danja.
Fandraharahana ho an'ny vehivavy ao an-tanàna kely
Na dia misy vehivavy monina ao amin'ny faritany aza, manana hevitra marobe izy amin'ny fampivelarana ny orinasany. Ireo hevitra ara-barotra malaza ho an'ny vehivavy:
Kardinaly any an-trano.
Tari-dalana manokana ho an'ireo toerana mahaliana eo an-toerana.
Mampianatra ny fanjaitra.
Fandaminana seho an-tsary manokana.
Aerodesign - famolavolana amin'ny alalan'ny baolon'ny asa samihafa.
Fiaraha-miasa any ambanivohitra ho an'ny vehivavy
Miaina ao amin'ny tanàna kely iray ianao, afaka manokatra orinasa vehivavy. Fivarotana fampiroboroboana ambanivohitra ho an'ny vehivavy avy amin'ny tabataba:
Fikolokoloana vorona tanora amidy.
Famokarana sy fivarotana felam-bary.
Business amin'ny alikaola.
Fiompiana vorona ginea.
Tetezana an-jaridaina vita amin'ny hazo.
Vokatry ny varotra.
Vehivavy nahomby tamin'ny asa
Matetika dia mety re ny hoe misy vehivavy sy raharaham-barotra amin'ny fiaraha-monina maoderina mirindra. Ohatra iray amin'izany ny fiantsoana ireo vehivavy rehetra izay nahomby tamin'ny fahombiazan'ny asa. Anisan'izany:
Elix Brooks - mpiara-manorina ny orinasa fanta-daza manerantany ho an'ny famokarana kilalao kilalao ankizy.
Emily Weiss no mpanorina ny Glossier
Azita Ardakani - mpanorina ny Lovesocial
Blake Lively - mpilalao sarimihetsika, mpamorona ny Preserve
Michel Feng no mpanorina ny tranokala ipsy, mpitoraka blaogy
Ishwin Anand no mpanorina ny OpenSponsorship
Boky raharaham-barotra ho an'ny vehivavy
Ny fahombiazan'ny vehivavy mahomby amin'ny raharaham-barotra dia hiteny amin'ireo mpamaky lahatsoratra malaza toy izao:
"Tari-dalana mifototra amin'ny toro-hevitra" Stephen Covey. Milaza ny boky fa ny mpandraharaha tsirairay, na inona na inona asa aman-draharahany, dia tena manan-danja tokoa ny fahafahana hihaino.
"9 sekretera ny vehivavy mahazo ny zava-drehetra" Keith White. Ny boky dia mitovy amin'ny diarin'ny tena manokana momba ny mpanoratra, izay nanambarana ny paikady vokatry ny fanamarihana.
"Lalàna folo momba ny fahombiazana maharitra" Maria Bartiromo. Maro ny fanantenana, fahendrena ary fahazotoana. Ny boky dia nosoratana ho an'ireo izay te hanomboka ny raharaham-barotra ataony sy ireo mpandraharaha tena izy. Momba ny famotehana ny sakana sy ny fiakarana ambony araka izay azo atao.
"The New Brain" avy amin'i Daniel Pink. Ny boky dia tena malaza eo amin'ireo mpifaninana. Mampianatra anao ny fomba tsara indrindra hanatonana toe-javatra samihafa ao amin'ny orinasa.
"Ataovy toy ny lehilahy iray, mandroso toy ny vehivavy: ny tsiambaratelon'ny lahy amin'ny fahombiazana, izay tokony ho fantatry ny vehivavy rehetra" Gale Evans. Milaza ny mpanoratra fa raha mahomby ianao ary mino ny raharahanao manokana dia mety hahomby ny orinasa vehivavy.
Sarimihetsika momba ny vehivavy eo amin'ny varotra
Ny sarimihetsika malaza momba ny vehivavy miasa:
Ny Devoly Mitondra ny Prada / Ny Devil Mitondra ny Prada - USA 2006. Miresaka momba ny faniriana ara- barotra amin'ny faritany ny sarimihetsika.
Vehivavy Business / Working Girl - USA 1988 Misy mpitsikera ary ankehitriny ity sarimihetsika ity dia asaina manahaka ny boky momba ny fitomboan'ny asa.
Tsy fantatro hoe ahoana no ataony \_ I D'tsy Knоn Hоw Shes Des It - Etazonia 2011. Ny sarimihetsika dia milaza fa ny vehivavy dia afaka mampifandray ny fitomboan'ny matihanina, ny fitaizana zanaka, ny fanambadiana ary koa ny fitadiavana amin'ny toe-javatra mahatsikaiky.
Ahoana no ahitanao ny asa aorian'ny fialan-tsasatra?
Ahoana no ahitanao zavatra tianao indrindra?
Business avy amin'ny tabataba ho an'ny vehivavy
Ahoana no ahazoanao vola any an-trano?
Inona no atao amin'ny fisotroan-dronono amin'ny vehivavy tokana?
Palpitation ny foetus
Selenium amin'ny vokatra sakafo
Ireo karazana varimbazaha voaloham-bokatra
Fahaterahana fahatelo - firy herinandro?
Sakafo avy amin'ny tsangambato Adyghe
Zrazy - sakafo tsara indrindra amin'ny lovia miaraka amin'ny hena, holatra, karaoty
Trano vy mirehitra
Zava-mahadom-paty - Toeram-pitsaboana sy fanoherana
Manao akanjo lava amin'ny tananao manokana
Lalao fampisehoana an-jatony